Nhau - Kurongwa kweCalcium Carbonate
Kurongwa kweCalcium Carbonate
Calcium Carbonate inogona kukamurwa kuita: inorema calcium Carbonate, mwenje calcium Carbonate, inoshanda calcium Carbonate, flue gasi desulfurization calcium Carbonate, yakanyanya calcium calcium carbonate, nezvimwe.
Chimiro cheremu calcium carbonate haina kujairika, saizi yayo inowirirana inosiyana zvakanyanya, uye zvidimbu zvine mamwe makona nemakona, pamusoro pacho pakaipa, iyo saizi yekuparadzira saizi yakafara, uye iyo svosve saizi yakakura. Ivhareji yesaizi size inowanzo kuve 1-10μm Zvinoenderana neyakaenzana ayo epakutanga saizi (d), inorema calcium carbonate yakakamurwa kuita: coarsely ground calcium carbonate (> 3μm), finely ground calcium carbonate (1 ~ 3μm), ultrafine calcium carbonate (0.5 ~ 1μm heavy calcium carbonate) Hunhu hunhu : a. Chisina kujairika chidimbu chimiro; b. Wide PARTICIPLE saizi yekuparadzira; c. Kukura kwema particle.
Calcium Carbonate yave ichishandiswa zvakanyanya mukugadzira mapepa, mapurasitiki, mafirimu epurasitiki, makemikari mafibhi, rabha, zvinonamatira, zvisimbiso, makemikari epamba, zvigadzirwa, zvekuvaka, zvipfeko, pendi, inki, putty, kuvhara wax, putty, kunzwa kurongedza, mushonga, chikafu (Senge kutsenga chingamu, chokoreti), chikafu, mabasa acho ndeaya: kuwedzera huwandu hwechigadzirwa, kudzikisa mutengo, kugadzirisa kugadzirisa mashandiro (sekugadzirisa viscosity, rheological properties, vulcanization performance), kugadzirisa kugadzikana kwekusimbisa, kusimbisa kana semi-kusimbisa, kugadzirisa Kudhinda mashandiro, kugadzirisa zvinhu zvepanyama (senge kupisa kupisa, kukwikwidza kusagadzikana, kudzvinyirira abrasion, kudzora murazvo, kuchena, kubwinya), nezvimwe.
Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira mapepa, mapurasitiki, mafirimu epurasitiki, makemikari faibha, rabha, zvinonamatira, zvisimbiso, makemikari epamba, zvigadzirwa, zvigadzirwa zvekuvaka, zvipfeko, mapendi, inki, putty, kuvhara wax, putty, kunzwa kurongedza, mushonga, chikafu (sekutsenga chingamu), Chokoreti), chikafu, mashandiro ayo ndeaya: kuwedzera chigadzirwa vhoriyamu, kudzikisa mutengo, kugadzirisa kugadzirisa mashandiro (sekugadzirisa viscosity, rheological zvivakwa, vulcanization performance), kugadzirisa kudzikama, kusimbisa kana semi-kusimbisa, uye kugadzirisa kudhinda kuita. Natsiridza zvimiro zvemuviri (senge kupisa kupisa, kukora, kudzvinyirira abrasion, kudzora murazvo, kuchena, kubwinya), nezvimwe.
Inoshanda Calcium Carbonate
Calcium inowedzera. Iyo inogona kusimudzira iko kuverengerwa kwemongo wemapfupa nemeno, chengetedza yakajairika kushushikana kwetsinga nemhasuru, uye kudzora capillary kukwana. Iyo inoshandiswa kudzivirira uye kurapa zvirwere zvisingaperi zvinokonzerwa nekushaikwa kwecalcium.
Kaolin ine akasiyana siyana mashandisiro, kunyanya epapermaking, ceramics uye zvinhu zvinokanganisa, uye chechipiri chekufuka, zverabha mafirita, enamel glazes uye chena simenti mbishi zvigadzirwa.
Kaolin isiri-yesimbi zvicherwa, rudzi rwevhu nevhu dombo rinotongwa nekaolinite ivhu zvicherwa. Inotumidzwa zita mushure meGaoling Village, Jingde Town, Jiangxi Province. Iyo yakachena kaolin yakachena, yakanaka, yakapfava uye yakapfava, ine yakanaka mapurasitiki uye moto kuramba. Kuumbwa kwayo kwemamineral kunonyanya kuve kwakagadzirwa kaolinite, halloysite, hydromica, illite, montmorillonite, quartz, feldspar uye mamwe mamineral.
1. Iko kushandiswa kwa kaolin mu ceramic indasitiri: Kaolin yeiyo ceramic indasitiri irondedzero yezvigadzirwa zvakagadzirwa nepamusoro-soro mbishi zvigadzirwa uye advanced technology uye zvishandiso. Chigadzirwa chine kuchena kwakadzika, kugadzikana kwemakemikari zvivakwa, uye ine yakanakisa yakasarudzika yemuviri kuita kwekubatsira kwemhando dzakafanana dzemumba. Zvigadzirwa zvedongo zvakagadzirwa chena, gobvu, simba remuchina, uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
2. Iko kushandiswa kwekaolin muindasitiri yerabha: Kaolin inoshandiswa muindasitiri yerabha inogadzirwa nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye yakanatswa nekukwirisa. Chigadzirwa chine hutete hwakatsetseka, hunyoro hwakadzika, yakatsiga PH uye DPG adsorption, uye sedimentation vhoriyamu iri pamusoro pane iyo index yakatsanangurwa nebazi reChemical Industry.
3. Iko kushandiswa kwekaolin muwaya uye tambo yekugadzirisa: Kaolin anoshanda zvinowedzera zvinowanzoshandiswawo muwaya uye tambo kugadzira, kunyanya kune EPDM tambo.
4.Kushandiswa kwekaolin mukugadzirwa kwekurima: calcined kaolin ine chinodzivirira pamhepo inonzi infrared ine wavelengths e7-25μm. Kana yakagadziridzwa calcined kaolin ikawedzerwa, tembiricha yeusiku mufirimu rekurima inogona kuwedzerwa ne2-3°C. Deredza musiyano wetembiricha pakati pezuva neusiku, zvinova zvinobatsira mukukura kwezvirimwa.
5. Iko kushandiswa kwekaolin mune yekumabhizimusi indasitiri: calcined kaolin yakanyatsogadziriswa aluminium silicate extender pigment uye yakawanda yekuwedzera inowedzera. Iyo ine yakachena kuchena, yakaderera kusachena zvemukati, yakasimba kemikari inertness, iri nyore kupararira mumvura-yakavakirwa uye oiri masisitimu, uye inogona kuiswa Water-yakavakirwa pendi, pendi, putty uye sealant, nezvimwe.
6. Iko kushandiswa kwekaolin muindasitiri yeinki: kaolin yeindasitiri yeingi inogadzirwa nemhando yepamusoro mbishi zvigadzirwa uye zvemhando yepamusoro tekinoroji nemidziyo. Chigadzirwa chine kuchena kwakasimba uye kugadzikana kwemuviri nemakemikari zvivakwa. Iyo inogona kutsiva chikamu che titanium dioxide, kudzikisa inki yekugadzira mutengo, uye kugadzirisa kunyorera kweinki. Simba, tinting simba, kunatsiridza ingi kuti adsorption, rheology, chiedza chaiyo giravhiti, Anti-kunayisa, nokudaro kuvandudza kunaka ingi.
7. Iko kushandiswa kwekaolin muindasitiri yeglue: kaolin inoshandiswa muindasitiri yeglue, iyo yakanatswa nemhando yepamusoro yezvigadzirwa uye tekinoroji yepamberi nemidziyo. Chigadzirwa chine kugadzikana kwemuviri uye kwemakemikari zvivakwa, yakakwira viscosity, kuchena kwakanaka, kwakanyanya kuturika uye kuyerera, uye hapana chakuvhe. Iyo yakanaka yakachipa-inodhura glue yekuzadza. Vanogadzira mudzimba vakashandisa kaolin upfu kutsiva starch inodhura.
8. Iko kushandiswa kwekaolin muindasitiri yepurasitiki: indasitiri yepurasitiki inoshandisa kaolin mainjiniya epurasitiki, mapurasitiki akasarudzika, uye yakakosha yakagadziridzwa kaolin kune tambo accessories. Inowanikwa nekusarudza yakakwira-giredhi uye yepamusoro mbishi zvigadzirwa, uchishandisa advanced tekinoroji uye zvishandiso, uye yakagadziridzwa necalcination uye coupling mumiriri.
9. Iko kushandiswa kwe kaolin mu petrochemical indasitiri: inoshandiswa senge chinokonzeresa mukugadzirisa peturu. Nekuda kwechinogadziridza chakagadzirwa naKaolin, ine yakakwira matrix chiitiko, yakasimba kusimba kune inorema simbi kusvibiswa, zvirinani chiitiko chekubatsira uye kusarudza.
10. Kaolin inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemapepa. Kune nzvimbo mbiri dzakakosha, imwe ndiyo yekuzadza inoshandiswa mukugadzira mapepa, uye imwe ndiyo pigment inoshandiswa mune yekumhara kwepamusoro maitiro.
11. Iko kushandiswa kwekaolin mumaindasitiri ari kubuda. Kaolin ine yakachena kuchena uye kupenya, yakapfava, yakasimba kunwa mvura uye nyore kuora uye kumisa mumvura, yakanaka mapurasitiki uye yakanyanya kunamatira, yakanakisa magetsi kuputira, yakanaka asidi solubility, yakasimba ion adsorption uye ion kuchinjana Performance, yakanaka sinterability uye yakakwirira refractoriness.